Odokotela bayaziqonda ukuvuvukala kwe- purulent ngaphansi kwe- hydradenitis, okubalulekile ezigulini ezisabekayo eziseduze nezitho zangasese, izinsipho, kanye namagundane. Lezi zikhathi ezivame ukuba yizindawo zokutholakala kwe-hydradenitis, ngoba endaweni engaphansi kwe-underarm ukuthi izinhlayiya ze-sebaceous ziyasebenza kakhulu, futhi isikhumba singalimala kabi ngenxa yokushefa njalo. Ngokuvamile, ukuthuthukiswa kwalesi sifo kuvuselela okuthiwa i-Staphylococcus aureus, engangena emangqamuzaneni, ngokusebenzisa izinwele zezinwele kule njongo.
Inikeza ukubonakala kwe-hydradenitis ngokweqile, okuvumela amabhaktheriya anobungozi kakhulu ukuba angene emzimbeni womuntu. Isidakamizwa kuphela esingasheshe siphume futhi siphumelele ukuphulukisa i-hydradenitis yiphunga elilodwa ne-ichthyol, elingathengwa kunoma iyiphi ikhemisi.
Indlela yokuphatha i-hydradenitis?
Ukwelashwa kwe-hydradenitis ngokuvamile kuvame ukwelashwa kwezinye izifo ezivusa ukubonakala kwazo. Phakathi kwezifo zokugcina - izifo zobulili, isifo sikashukela. Ngaphezu kwalokho, lesi sifo singaqala kulabo abaye bathola ukwelashwa ngamakhemikhali noma ukwelapha imishanguzo, kanye nalabo abanesandulela-ngculazi esincane. Kumele kuqashelwe ukuthi i-gidradenitis yisifo ikakhulukazi sabantu abasha, ngoba imisipha ye- sweat isencane kakhulu ekukhuleni kwayo eneminyaka engu-16 kuya ku-40. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi emantombazaneni nabafana abasesikhathini sokukhulelwa, khona-ke kukhona ukuthuthukiswa okusebenzayo kwezigulane zokuthuthumela . Ukuqonda indlela yokwenza kahle ukwelashwa kwe-hydradenitis, udinga ukwazi izimpawu zayo. Ngokuvamile konke kuqala ngokubonakala kwama-nodules amancane ngaphansi kwesikhumba esingabonwa kalula ngokuthinta. Umuntu uzwa ubuhlungu obuhlungu futhi abuhlungu endaweni. Ngokushesha i-knot iyaqhuma, futhi indawo yendawo esikhumbeni iqala ukufana nengono. Isayithi ithatha cishe izinsuku ezingu-15 ukuze zenzeke. Kwezinye izimo, ukwelashwa kwe-hydradenitis akunakwenzeka ngaphandle kwe-autohemotherapy - inqubo ekhethekile yokufaka esikhumbeni isiguli igazi lakhe.
Ukuqeda ukutheleleka okubangela ukuba i-hydratant, isiguli kumele sithathe ama-antibiotics, ama-sulfonamides, kanye nemithi yokubuyisela engakwazi ukuthuthukisa ingculazi. Ngokufana nokuthatha imithi, ukwelashwa kwe-hydradenitis kwenziwa ngokuphatha konke ukuvuvukala kwe-foci, okungukuthi ukusetshenziswa kwezicubu ezifudumele, UHF, i-ultraviolet irradiation.
Kwezinye izimo, ukwelashwa kwe-hydradenitis kungenzeka kuphela ngokungenelela kokuhlinzeka, uma isilonda sivulwa futhi igazi ne-pus zisuswa kuwo, bese kuthiwa baphathwe ngezidakamizwa zokulwa nezifo. Lapho isikhumba siqala ukuphulukisa, singabonakala sikhala esingafakwa ngamafutha e-sea buckthorn. Ngokusho odokotela, esinye sezifo zesikhumba esivame kakhulu i-gidradenit ngokuqondile, isithombe esingase sishaqeleke. Ukuze ugweme ukubukeka kwalesi sifo, kwanele nje ukugcina imithetho yokuhlanzeka, odokotela bathi.
Amatshe Blue. ngamasafire uPrecious izakhiwo zabo
Uchungechunge lwezihloko ezithi "zokubhalisa ayitholakali okwamanje": nabalingisi izindima
Uba kanjani acebile? Uba kanjani yimpumelelo futhi acebile? Njengoba ocebile ucebe: iyini imfihlo zabantu yimpumelelo
Umuthi-zinambuzane "Intavir". Yokusetshenziswa
Ukufunda izilimi zakwamanye amazwe ku Lingualeo - Izibuyekezo
Sprites amageyimu - kuyini?